यौन | Ratopati
यौनको मामिलामा ‘विश्वगुरु’ प्राचीन भारत access_timeमाघ १६, २०७६
एजेन्सी । ‘कामसुत्र’का रचयिता वात्स्यायनभन्दा सयौँ वर्ष अघि ग्रीक साहित्यमा यौनको अवधारणामाथि व्यापाक वहस भएको थियो । ग्रीक दार्शनिक प्लेटोले यौनलाई ‘अरुमाथि अधिकार जमाउने आकाङ्क्षा’ भनेका छन् । ग्रीक नाटककार अरिस्टोफैन्सले ‘सिम्पोजियम&rs...
किन चाहियो भियाग्रा ? यौनक्षमता बढाउनका लागि यी खानेकुराहरु खानुहोस् access_timeमाघ ४, २०७६
यौन क्षमताको कुरा गर्न मानिसले जतिसुकै संकोच गरे पनि, हिच्किचाहट भए पनि यो विशुद्ध शारीरिक आवश्यकताको कुरा हो । यौन क्षमता राम्रो भएन भने मानिसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक र पारिवारिक जीवन नै पनि अस्तव्यस्त बन्न सक्छ । खासगरी, भियाग्रा लगायत यौन क्षमता बढा...
यौन दुर्बलता : मानिसकाे याैनजीवनलाई नै तहसनहस पारिदिने खतरनाक समस्या ! access_timeपुस १५, २०७६
यौन दुर्बलता भनेको त्यस्तो समस्या हो, जसमा जोडीले यौन गतिविधिबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्दैन् । यौन क्रियाकलापमा सक्रिय करिब ४३ प्रतिशत महिला र ३१ प्रतिशत पुरुषमा कुनै न किसिमको यौन दुर्बलताहरु हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ । के हो यौन दुर्बलता ? यौन दुर्बलता ...
दिनमा पाँच कप कफी पिउँदा क्यान्सरको खतरा १२ % कम हुने, २० % तौल कम पनिः थाहा पाउनुहोस् अन्य फाइदा